Argentina LOO BAAHANYAHAY si loo soo dajiyo 4,000 TO 5,000 ATM CRYPTO dalka - Blockchain News
Laga yaabaa 2, 2018 admin
Argentina LOO BAAHANYAHAY si loo soo dajiyo 4,000 TO 5,000 ATM CRYPTO dalka
Argentina ugu dhakhsaha badan waxaa laga yaabaa in hoggaamiye ee suuqa ATM crypto. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, dalka diyaar u ah inay helaan inta u dhaxaysa waxaa laga yaabaa in 4,000 iyo 5,000 ATM oo taageera lacagaha dalwaddii.
Sida laga soo xigtay CEO iyo aasaasaha Odyssey Group, Sebastian Ponceliz, ATM ma aha oo kaliya loo isticmaali doonaa in dadka u soo saaro lacag caddaan ah, laakiin sidoo kale lagu maareeyo lacagaha dalwaddii, iyada oo isticmaalka ATM Seeraar bi-jiho.
"Waxaa jira waa waxa aan soo wici wada lacageed in ka dhigaysa noo isticmaalaan noocyada kala duwan ee loo adeegsanayo bixinta iyo is-dhaafsiga (lacag caddaan ah, crypto, e-boorsooyinka, dhibcood daacad, iwm) iyo barta xiriirka aadanaha waayo, taasu waa ATM in xawilaad aad karaa lacagaha kala duwan, jeestay lacag digital galay qeybsanaan jirka iyo ku xigeenka,"Sharxayaa Ponceliz.
Odyssey Group waa mid ka mid ah bixiyeyaasha ATM ugu weyn ee dalka Mareykanka, Mexico, Colombia iyo Spain.
Go'aanka ayaa lagu qabtay by shirkadda wax yar ka dib markii ay xukuumadda Argentinian go'aansaday in la beddelo xeerarka iyo oggolaadaan in shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay u leedahay ATM dukaamada iyo dukaamada.
Sida laga soo xigtay Radar quful ATM, hadda ma jiraan ATM Seeraar heli karo Buenos Aires.
Sidee si ay u helaan on cryptotrading intraday?
BMW isticmaali doonaa blockchain la dagaalanka shaqaalaha ee caruurta
CEO of st ee London ...
Post Previous:Scientist.com bilaabay madal blockchain ku salaysan xaqiijinta xogta a
Post Next:Sharci-dajiyayaasha US inay maqlaan kiis sahaydu blockchain
furtdsolinopv ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 8, 2018 at 12:31 AM
Laga yaabaa 9, 2018 at 12:57 AM
ina ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 20, 2018 at 12:27 AM
Flickner ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 29, 2018 at 3:31 AM